Madaxtooyada Somaliland oo ka xayiraysa dadka in ay helaan shabakada Hadhwanaagnews(Hadhwanaagnews) Monday, January 09, 2017 05:43:08Waa talaabo ay miciin moodeen wasiiro iska difaaci kari waayey xaqiiqada lagu hayo ee boobka qaranka Somaliland
Sida illo aad looga qaateen ah oo ka agdhow madaxtooyadu ay ku soo wargaliyeen Hadhwanaagnews, waxa ka socda Madaxtooyada Somaliland qabanqaabo dacwadeed oo dadka Reer Somaliland ee ku sugan gudaha dalka lagaga xayirayo in ay booqdaan ama ka akhristaan saddexda shirkadood ee dalka Somaliland ee bixiya adeega Internetka. Waa Telesom, Somtel iyo Somcable.
Sida ilahani u sheegeen Hadhwanaagnews, waxa talaabadani timid kadib markii Hadhwanaagnews ay soo qortay warar xaqiiqo ah oo ku saabsan boobka qaranka ee ay ku hayaa xubno wasiiro ah oo dalka taladiisa awood buuxda kuleh. Arinkan laga maleegayo Madaxtooyada ayaa la sheegay in la diyaarinayo warqad loo gudbinayo Xeer -Ilaalinta Qaranka
oo lagu wargalinayo in ay qoraal xayiraad ah u kala dirto dhamaanba shirkadaha Internet-ka ee ka jira Somaliland.
Talaabadan ayaa ah miciin ay bidayaan wasiirada ay ugu horayso Samsam Cabdi Aadan oo lagu hayo wax-is-daba marin, lunsi lacageed, eex, iyo u isticmaalka Wasaarada Maaliyada meel u ah irmaan aan cidi xisaabin oo iyada iyo qoyska Madaxtooyada oo ay kow ka tahay Aamina-wari, marwada madaxweyne Axmed Siilaanyo oo taladii dalku ay u gashay gacanteeda.
Sida Ilahani sheegayaan waxa Xeer-ilaalinta maalmaha soo socda laga yaabaa in ay u kala dirto shirkadaha adeega Internet-ka amar ah in laga xayiro Hadhwanaagnews dadka Somaliland, si ayna u helin wararka xaqiiqada ku salaysan ee ayna iska difaaci karin.
Haddii ay talaabadani hirgasho, Hadhwanaagnews waxa uga qorshaysan in ay sharciga dalka isku difaacdo, kuna difaacda shacbiga la isku dayayo in indhaha iyo dhagaha la qabto, si aanay ula socon waxa madaxdooda takri-falka wadaa u dhaqmayso.
Hadhwanaagnews 24 ka saacadood ee soo socoda waxa suurto gal ah in xayiraadaas lagu soo rogo, waa haddii ay u hogaamsamaan shirkadaha dalka ee Internet-ka ay shacbigu u macmiisha ahi uga ibsadaan adeeg si ayu helaan macluumaad kala duwan, oo ay kow ka yihiin xogaha qarsoon ee saamaynta ku leh.
Dhanka kale Hadhwanaagnews, ma noqon karto mid ayna dhamaanba bulshad Somaliland ee dalka dibadiisa ku sugani aanay heli karin, maadaama isku dayga xayiraadu ku kooban yahay, oo loola jeedo uun shacbiga dalka gudihiisa ku sugan in ay ka dhago iyo indhoba la'aadaan waxa gundahooda ka socda.
Talaabadan ayaa noqon doonta mid toos uga hortimaada xuquuqda shacabiga ee ah in ay si xor ah u helaan macluumaad, rayigoodana u gudbin karaan, waana talaabo tijaabo ku ah dhamaanba saxaafadda Somaliland, isla markaana ah badheedh lagu jabinayo xuquuq uu Dastuurka Somaliland jideeyey.
La soco warkan wixii ka soo kordha. Hadhwanaagnew waxay toos ula xidhiidhi doontaa Wasiirka Madaxtooyada si ay u weydiiso sharciga iyo sobobta ay u daliishanayaan talaabadan ugubka ah loola jeedo shacbiga xorta ah ee Somaliland oo aan hido u lahayn in ay yeelaan cabudhin nooc kastoo ay tahayba.